🥇 ▷ Samsung Galaxy Tab A2 (10.5) waxaa lagu sifeeyaa sawirro cusub oo dhab ah ✅
Samsung Galaxy Tab A2 (10.5) waxaa lagu sifeeyaa sawirro cusub oo dhab ah
Dhowr maalmood ka hor waxaan ku tusnay muuqaalkii ugu horreeyay ee la sifeeyay ee Galaxy Tab A2 (10.5), mustaqbalka kiniiniyada in Samsung noo keeni lahaa.
Hadana waxaan heysanaa dad kale oo kaa tusiya iyada. Tan gadget wuxuu ka heli lahaa shahaadadiisa FCC oo ay la imaan laheyd tusaalooyin iyo xog cusub.
Midka ugu horeeya sawirada waa kan kore ee khadadkaan. Waan arki karnaa taas cidhifyada dambe waa ka yar yihiin kuwa kore iyo kuwa hoose.
Faahfaahin kale oo cajiib ah ayaa ku jirta maqnaanshaha akhristaha faraha. Sidii aan horey kuugu sheegay, Tani waxay noqon laheyd kiiska kharashka badhamada shaashadda.
Su’aashu waxay noqon doontaa inaanu si wanaagsan u saamixi doonno furitaankaas oo caadi u ah maanta. Miyay dhigi doonaan sheybaarka shaashadda hoosteeda? Miyay geli doonaan nidaam kastoo furitaan wajiga ah? Su’aalaha jawaab la’aan illaa iyo hadda.
Galaxy Tab A2 (10.5) waxaa lagu aqoonsaday magaca la magacaabay SM-T590. Sida saxda ah lambar la mid ah kii oo horay isku shaandheyn jiray kahor.
Nooca USB-ka C iyo mashiinka taleefanka madaxa
Qeybta kore ee sawirka kore waa la qadarinaa – waxyar – laba ku hadla. Hada lama sheegin hadii AKG ay soo faragalineyso tayada maqalka, laakiin wax aan caadi aheyn ma ahan. Tan iyo markii Samsung lagu sameeyay astaanta noocan ah, kor u qaadista dhammaan alaabteeda ayaa astaan ​​u ah a lagu daro kala duwanaanshaha tartanka.
Waxaan sidoo kale arki karnaa isku xiraha dallaca. Malaha waxaan ka hadlaynaa a Nooca USB C. Waxaa ku xiga waa isku xiraha Jack 3,5 mm dhagaha.
Shakhsi ahaan, waxyaabaha ugu xun ayaa kajira kamaradda hore. Kadib markii aan si faahfaahsan u eegayay sawirka Waxaan kala saaraa laba dareemayaal. Waxaa laga yaabaa in xaruntu tahay kamarad iyo dhinaca si loo ogaado iftiinka khafiifka ah… ama laga yaabee inuu yahay nidaamka aqoonsiga wajiga.
Xalka la aqbali karo si loo dhammeeyo waxyaabaha ku duuban warbaahinta
Si loo soo afjaro shaandheeyntaan, Samsung Galaxy Tab A2 (10.5) lahaa 10.5 inji – halkan magaceeda – qaraarka 1920 x 1200 pixels.
Tani waxay ka dhigan tahay inay ina siinayso tayo aad u wanaagsan oo aan ku raaxeysan karno waxyaabaha ku duuban warbaahinta, marka laga reebo inay awood u yeelan karto inay dhex gasho internetka oo aan la macaamilno shabakadaha kala duwan ee bulshada iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin.